Addis university miyay kacday? Mise dadbaa kicitaanka la jecel? WQ- Maxamed Galaydh. | Haqabtire News
Addis university miyay kacday? Mise dadbaa kicitaanka la jecel? WQ- Maxamed Galaydh.
Marka koobaad ilaahay ayaa mahad iska leh,ii dhamays tiray laxaadkayga iiguna daray caafimaadka .
Marka xigtana waxaan u mahad celinayaa akhristayaashayda qiimaha badan.
Inta badan dunida way ka jiraan jaamacado bareefada oo ay gaar u leeyihiin muwaadiniinta waddan kaasi ,waa hadba kii la joogee,sidoo kale waxaa jira jaamacado dawliya oo ay xukunto hadba ciddii talada waddanka haysaa,waa hadba waddankii la joogee.
Laakiin waxaa adag in waddan kale jaamacadiisa farac uga sameeyo waddan kale! Isagoo xanbaarsan manhajkii waddankiisa iyo magicii magaaladiisa.
Balse”markaad eegto duruufaha iyo waddankeenii oo bur-buray Ku canaanan maysid qof halkan jaamacadd waddan kale laga leeyahay keenay,oo waxaad arkaysaa dalkii oo dhan oo aanaad waxba ka qaban Karin,cid kalena gacanta Ku hayso, taasna duruufaha iyo waayaha inagu habsaday u daa!
Haddaba iyadoo ay taasi jirto waxaa laysku dhaafay tayo iyo taariikh hadba wixii aad la timaado.jaamacaddaheena inta badan dad gaara ayaa iska leh ,haba lahaadaane, qaarbaa magaca oo meel madhan umadda ka kireeya. Mid maaha oo labo maahee way tiro beeleen ,inta aan aqoon lagu baran,shahaadadooduna aanay wax aqoonsiya lahayn.
Daraasad iyo baadhitaan aan sameeyey ,waxaan xaqiiqsaday, in ugu yaraan soomaalilaan” Ku yaalaan dhawr iyo labaatan jaamacadood ,oo ay laba ka mida xukuumaddu Ku magacaabantahay.
Lix ka mida mooyaane waxa kale waxaa waajiba in layska xidho,kuwaasoo u badheedhay inay ka ganacsadaan waxaan sharci lahayn . kaliyana danaynaaya lacagta sixir bararka ah ee ay ardayda ka qaadaan.
Waxba magacaabi maayo jaamacadahaas balse,waa kuwa laysla wada yaqaano.waxaanay u hishiiyeen tirada yar ee jaamacadahaa isla markaana tayadoodu sarayso,oo ay ka mid tahay ” Addis university ”
Maalmihii u danbeeyey waxay ka faafiyeen dacaayadd aan meel caddaynteeda loogu hagaago la hayn,kuwaasoo ka xumaaday ardayda burco oo guud ahaan jaamacadda iyada ah dhigata iyo tayadooda oo la mahadiyay.
Waxaan leeyahay Addis ilaahayna waa idin ogyahay! Umadduna way idinla jirtaa ee ha u joojinina dacaayadaha caataynkaa.